Vaovao - Vaovaon'ny orinasa
Cherish, natsangana tamin'ny 1995, dia miorina ao Yiwu, Sina, renivohitry ny entana kely eto an-tany. Izy io dia mifantoka amin'ny famolavolana vokatra vita tanana, famokarana ary marketing amin'ny orinasam-pamokarana matihanina.
Ny iraka ataontsika dia ny mitarika ny varotra mpanjifa amin'ny alàlan'ny famolavolana endrika vaovao, kalitao avo lenta, amin'ny fandefasana ara-potoana ary ny vidin'ny fifaninanana. Amin'ny fikatsahana orinasa, orinasa, fandresena avo lenta ataon'ny mpanjifa ho an'ny tanjon'ny "fiarovana tontolo iainana tsara kalitao" ho an'ny politikam-pitantanana tontolo iainana, miakatra sy midina ny eritreritra, ati-doha, ary ny fiaraha-miasa lalindalina rehetra, nandefa ny marika mankamamy nitarika ny Toro lalana fampandrosoana ny tsena avo lenta-stitch.
Ny orinasa dia efa nitazona ny fifandraisana fiaraha-miasa tsara amin'i Japon sy i Korea sy ny andrim-panjakan'ny stitch, ary ny fahaizany mamorona amin'ny indostrian'ny stitch cross dia eo amin'ny ambaratonga voalohany ao Shina. Izy io no nitarika ny fametrahana ny foibe famolavolana vokatra stitch amin'ny indostria, , Isan-taona, vola manokana an-tapitrisany natokana ho an'ny fampiharana ny famolavolana vokatra vaovao sy ny fitambarana fitaovana vaovao, hiantohana ny fahaizan'ny Cherish cross embroidery super design ary ny halalin'ny kolontsaina amin'ny fitrandrahana, ary ny harena sarobidy an'ireo aristokraty eropeana teo aloha lasa fialam-boly DIY vokatra ho an'ny mpanjifa ankehitriny, izay tena tian'ny ankamaroan'ny mpanjifa.